कुमार सानु भन्छन, 'मौलिकता जोगाउनु'
विनीता मरहट्टा सोमवार, साउन २, २०७४ 26656 पटक पढिएको
काठमाडौं : बलिउडका स्टार गायक कुमार सानु अचेल भारतीय संगीतदेखि दिक्क छन् । कथा, छन्द नबोकेका अर्थहीन गीतले बजार खाएको देखेर दिक्क सानुले नेपाली संगीतकर्मीलाई अनुरोध गरे- आफ्नो मौलिकता जोगाउनु । नेपालीसँग पुरानो नाता गाँसेका यी भारतीय गायकको अनुरोधमा समकालीन हिन्दी संगीतको ट्रेन्डप्रति नै वितृष्णा पाइन्थ्यो ।
सांगीतिक कार्यक्रमका लागि काठमाडौं आएका सानु आइतबार चन्द्रागिरिमा भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्दै थिए । नेपाली सौन्दर्यको बखान गर्दै उनी संगीतसम्म पुगे । नेपाली संगीतको मौलिक मेलोडी आफूलाई मनपर्ने बताउँदै जोड दिए, 'बलिउडको प्रदूषणदेखि नेपाली संगीतलाई टाढा राख्नु ।'
करिअरको सुरुदेखि नै नेपाली संगीतसँग जोडिएकाले यसमा आत्मीयता महसुस गर्ने उनले बताए । उनले सिलगुडीमा कार्यक्रम गर्न जाँदा नारायणगोपालको गीत गाएको समेत स्मरण गरे । नेपाली संगीत र शब्दले मुटुमै छुने भएकाले सुरुदेखि नै गाउन थालेको बताए उनले ।नेपाली संगीतमा अझै विकृति आइनसकेको ठहर थियो उनको । बलिउड संगीतमा फैलिएको विकृति बन्द गराउन नसके पनि नेपालको संगीत जोगाउन उनको अनुरोध थियो ।
बलिउडको बिग्रँदो ट्रेन्डसँग टाढा रहेर उनले अझै पनि गीतहरू गाइरहेका छन् । आफ्नै मौलिकताले स्थापित छन् उनी । भन्छन्, 'कुमार सानुको परिचय बनाउन धेरै पापड बेलेको छु, जस्तोत्यस्तो गीत गाउन थालेँ भने खस्किएर कहाँ पुग्छु ? लताजीले त्यस्तो गीत गाउनुभयो भने उहाँको परिचय के हुन्छ ? '
कलाकार समाजलाई सहीमार्गमा डोर्‍याउने माध्यम भएकाले उनले आफ्नोे सामाजिक जिम्मेवारी भुल्न नहुनेमा जोड दिए उनले । कुमार सानुले संगीत मात्र नभई नेपालले हिन्दु संस्कार जोगाइरहेकोमा पनि नेपालको प्रशंसा गरे । सन् १९९० देखि धेरै दुर्गा पूजा उनले नेपालमै गरेको उनले सुनाए । भारतमा भगवान्को पूजामा पनि श्रद्धा नभेट्ने बताए उनले । 'उता पूजाभन्दा बढी कसको ठूलो पण्डाल भन्ने प्रतिस्पर्धामात्र हुन्छ, नेपालमा भने धर्मप्रतिको श्रद्धा छ', उनले भने ।
बंगाली हिन्दु संस्कृतिमा हुर्केका उनी भालेश्वरको दर्शनले मनमा बेग्लै आनन्द प्राप्त भएको सुनाइरहेका थिए । क्यासिनो खेल्न तथा घुम्न बेला बेलामा नेपाल आए पनि कार्यक्रमको लागि भने २० वर्षपछि आएका हुन् । यसपटकको दर्शक प्रतिक्रियाले उनलाई खुसी तुल्यायो । नेपालमा धेरै परिवर्तन महसुस गरे ।
२० वर्षअगाडि नेपाल आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएका साना राता भवन, सानो रनवे, एकदुइटा मात्र हवाईजहाज भएको खाली ठाउँ स्मरणसमेत गर्न भ्याए उनले । अहिले भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तयार भएका हवाईजहाजले भरिभराउ विमानस्थल देख्दा रमाइलो महसुस गरेको सुनाए पनि । काठमाडौं सहरमा धेरै विकास देखे । पहिले प्रदूषित पशुपतिनाथ देखेर गएका उनलाई यसपालि त्यहाँको व्यवस्थापन र सरसफाइले आनन्द दिलायो । यसपालि घुम्नको लागि नयाँ गन्तव्यसमेत पाए, 'चन्द्रागिरि हिल'।
रातो टिसर्ट, घाँटीमा चाँदीको मोटो सिक्री र सनग्लासमा ठाँटिए पनि उनको बुढ्यौली केबलकार चढेर चन्द्रागिरि डाँडो पुगेपछि देखियो । दस मिनेटको उकालोमा करिब दुई पटक थकाइ मार्दै 'भालेश्वर महादेव' को मन्दिरसम्म पुगे । भगवान् शिवको आरती गरी माला र प्रसाद ग्रहणपछि नेपाली खानाको स्वाद लिए । नेपाली दाल उनलाई धेरै मन पर्दो रहेछ । हरियो खुर्सानी किरिक्क टोक्दै भने, 'बहुत टेस्टी' । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं हेरेर लोभिएको डाँडोले उनको मन पनि लोभ्यायो । चन्द्रागिरि डाँडालाई नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक बताए । चन्द्रागिरि हिलका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशी पाहुनालाई उहाँहरूको समयले भ्याएसम्म यहाँ घुमाउने गरेको बताए । कुमार सानुको आगमनले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा उनले लिएका छन् ।
शनिवार, माघ ६, २०७४ 'मैले काली भन्या छैन' म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
शनिवार, माघ ६, २०७४ न्यूयोर्क ‘फिल्म फेस्टिभल’मा दुई नेपालीको ‘डकुमेन्ट्री’ छनोट
शनिवार, माघ ६, २०७४ काठमाडौंमा सलमान खानको दबंग टुर
शनिवार, माघ ६, २०७४ नाचघरमा केलाङ र धाननाचको रौनक
शनिवार, माघ ६, २०७४ ‘साली कस्को भेनाको’ मैदानमा
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ प्रकाश राजले भने: म हिन्दुविरोधी होइन, मोदीको विरोध गर्न छोड्दिन
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ मनोज गजुरेल छोरासँग, मीना ढकाल छोरीसँग !
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ भैरहवामा नेपथ्यको रमाइलो साँझ
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 941
ट्रम्पको एक वर्ष : अलोकप्रियतामा एक नम्बर 599
डेढ लाख सेवाग्राहीले अझै पाएनन् ‘स्मार्ट कार्ड’ 124
कालिकोटमा निमोनियाले एकै टोलका तीन शिशुको मृत्यु 142
वेबबेस मोबाइल आईएमईआई दर्ता कार्यान्वयनमा लगिँदै 565